I-alumina ipulangwe yelumini ye-ceramic yokuqondisa izinwele China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Advanced Ceramic Plate > I-Industrial Ceramic Plate > I-alumina ipulangwe yelumini ye-ceramic yokuqondisa izinwele
Amapulangwe e-Ceramic okuqondisa izinwele
Ibhodi le-Alumina ye-ceramic yokuqondisa izinwele lenziwe ngama-alumina angama-95%, ingafakwa, noma ifakwe ngokucindezela okushisa ngokuzenzakalelayo nomzimba obunzima we-ceramic.
Siyakwazi ukwakha ibhodi ye-ceramic ye-hairener ' yezinwele ' njengeklayenti ngayinye yamakhasimende kanye nokucaciswa, noma yikuphi ukukhiqizwa kweprojekthi noma ukulahlekelwa phansi. Zonke izibhodi ze-ceramic esazenzile zinokuvumelana okufanayo.
Sivame ukwenza i-flat grindIng ukwenza uhlangothi lokusebenza lube lukhulu. Ngaphandle kwalokho, ukuze kuthuthukiswe ukukhishwa kwebhodi le-ceramic, ngezinye izikhathi, ukuphela kokuqhaqhazela phezu komsebenzi osebenzayo kuyadingeka, sinakho ngaphakathi endlini ukubhekana nale nqubo.
● Ukushisa okuphezulu okuphakeme ● Ukushaqeka okukhulu okushisayo
● Amandla angokwemvelo angaphezu kokuvamile ● Ukuphikiswa kwamakhemikhali
● Ukumelana nokuhlukumezeka
Uma ufuna ezinye izibhodi ze-ceramic zokuqondisa izinwele. Sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Sizozama konke esingakwenza ukuze sikunikeze ikhwalithi yekhwalithi kanye nensizakalo njengoba kulindelwe.